Cristiano Ronaldo Oo Soo Bandhigay Wixii Uu Qabanayay Markii Uu Lionel Messi Ku Guuleysanayay Abaalmarinta Xiddiga Sannadka & Fariin Cajiib Ah Uu Soo Qoray | Laacib.net
Cristiano Ronaldo Oo Soo Bandhigay Wixii Uu Qabanayay Markii Uu Lionel Messi Ku Guuleysanayay Abaalmarinta Xiddiga Sannadka & Fariin Cajiib Ah Uu Soo Qoray
September 24, 2019 Balaleti Comments Off on Cristiano Ronaldo Oo Soo Bandhigay Wixii Uu Qabanayay Markii Uu Lionel Messi Ku Guuleysanayay Abaalmarinta Xiddiga Sannadka & Fariin Cajiib Ah Uu Soo Qoray
Dad badan ayaa la yaab ku noqotay xafladii abaalmarinta FIFA Best Football Awards markii xiddiga Juventus Cristiano Ronaldo uu ka soo muuqan waayay xafladii ka dhacday magaalada Milan.
Ciyaartoyda sida Lionel Messi, Kylian Mbappe iyo Luka Modric ayaa ka mid ah xiddigaha magaca weyn ee soo xaadiray xaflada, waxayna dhamaantood ku jireen shaxda kooxda sannadka adduunka.
Si kastaba, kaliya 10 ciyaaryahan ayaa masraxa soo istaagay iyadoo 10 xiddig kaliya magacooda laga sheegay codbaahiyaha, iyadoo Ronaldo aan magaciisa la akhrinin inkastoo uu ka mid yahay shaxda kooxda sannadka adduunka.
Toban daqiiqo ka dib markii ay xaflada ka soo dhamaatay Milan, Ronaldo ayaa Instagram soo dhigay wixii uu qabanayay intii uu ka maqnaa xaflada, isagoo taageerayaashiisa la wadaagay sawirka uu buug akhrinayo halka wiilkiisa Cristiano Jr. uu shaqo guri sameynayo.
“Sabarka iyo adkaysigu waa laba astaamood oo kala sooca xirfadlaha iyo hiyaawadlaha.” ayuu soo qoray Ronaldo.
“Wax walba oo maanta weyn waxay ku bilowdeen iyagoo yar. Wax walba ma sameyn kartid, laakiin samee wax walba oo aad awoodo si riyadaada ay kuugu rumowdo.
“Maanka ku haay, habeenka gadaashiisa waxaa ahaaday waaberi”
Maqnaanshaha Ronaldo wax shaqo ah kuma lahan kulanka ay Juventus la ciyaareyso habeenka Talaadada kooxda Brescia ee Serie A sida laga dheehan karo hadalkiisa iyo sawirkiisa.
Ronaldo ayaa la filayaa inuu kulankaas ku seego dhaawac muruq daal ah.
Waa markii labaad ee uu Cristiano Ronaldo ka baaqdo xaflada abaalmarinta The Best ee FIFA isagoo aan tagin xafladii lagu qabtay London sannadkii hore markaasoo uu Luka Modric ku guuleystay abaalmarinta xiddiga sannadka, sidoo kale sannadkaas Messi isna ma uusan tagin xaflada iyadoo labada xiddig lagu dhaleeceeyay maqnaanshahooda.
Ronaldo ayaase sannadkii hore sida sannadkan ka mid ah musharaxiinta halka Messi uu sannadkii hore ka maqnaa seddexda xiddig ee u tartameysay.